Ciidamada Khaatumo oo Weerar ku ah Magaalada Laascaanood iyo Cali Khaliif oo ka hadlay Duulaankaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada Khaatumo oo Weerar ku ah Magaalada Laascaanood iyo Cali Khaliif oo ka hadlay Duulaankaas
MAREEG 29 May 2016
Wararka ka imaanaya deegaanada uu ka arimiyo maamulka Khaatumo uu Madaxweynaha ka yahay Cali Khaliif Galeyr ayaa sheegaya in ciidamada maamulkaasi ay wadaan diyaar garow ay ugu jiraan weerar ay ku qaadaan Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Madaxweynaha Maamulka Khaatumo State Dr. Cali Khaliif Galeyr, ayaa sheegaya in ciidamada maamulkiisa ay maalmaha soo aadan weerar ku yihiin magaalada Laascaanood ayna rajeenayaan in ay la wareegaan magaaladaasi dhawaan.
Waxa uu tilmaamay Mr Galeyr in ay diyaariyeen ciidamadii loogu tala galay in ay weeraraan Laascaanood lana wareegaan, waxa uuna ugu baaqay dadka maamulkiisa taageersan in ay gacan ka geestaan sidii ay magaaladaasi muhiimka ah ula wareegi lahaayeen.
”Waxaan ku rajo weynahay in aan la wareegno magaaada Laascaanood oo ah magaaladeena, bisha Octoper marka la gaaao waxaan rajo weyn ku qabnaa in Baarlamaanka Khaatumo ay ku shiraan magaalada Laascaanood” Ayuu yiri Madaxweyne Cali Khaliif.
Magaalada Laascaanood ee xaruunta Gobola Sool , waxaa hada maamula gacantana ku haya maamulka Somaliland, lamana oga sida uu Maamulka Khaatumo ay ugu surto galeyso in magaaladaasi ay soo galiyaan gacanta maamulkooda.
Two more Somali regions to form state-within-state
waxaa aad u kordhay tirada ardayda sanadkan u fariisatay imtixaanaadka ee Sh/dhexe
Exporting Domestic servants to Saudi Arabi